SIDA LACAGTA LOOGU SAMEEYO BILAASHA BILAASH: 30 -ka dariiqo ee ugu wanaagsan 2021
Bogga ugu weyn SIDA LACAGTA LOOGU SAMEEYO BILAASHA BILAASHKA: 30ka dariiqo ee ugu fiican sannadka 2021
SIDA LACAGTA LOOGU SAMEEYO BILAASHA BILAASHKA: 30ka dariiqo ee ugu fiican sannadka 2021
Isha sawirka: www. unsplash.com
Wali ma taqaanaa siyaabaha aad lacag uga sameyn karto internetka bilow ahaan? Miyaad rabtaa inaad ku raaxaysato wanaagga internetka soo gala xitaa haddii ay yar tahay laakiin waxaad diyaar u tahay inaad qabato shaqada oo aad kasbato wax weyn ka dib? Waa hagaag, waa inaad tan akhridaa.
Lacag ku sameynta internetka waa habka ugu dhaqsaha badan ee lagu kasban karo lacag caddaan ah maanta iyo da'daan. Waxaad ku kasbataa intarneedka in ka badan intarneedka. Ogaanshaha inaad lacag meel fog ka samayn karto iyo waqtigaaga ayaa wanaagsan internetka.
Waxaa jira aagag badan iyo aalado la heli karo oo qofku bilaabi karo inuu lacag ku sameeyo internetka. Si kastaba ha noqotee, xiriir internet oo xoog leh iyo aalad ayaa ah waxa aad u baahan tahay si aad ugu raaxaysato wanaagga meelahan.
Halkan, maqaalkani wuxuu daaha ka qaadayaa 30 siyaabood ee ugu fiican ee adiga bilowga ah aad ku bilaabi karto inaad lacag ku sameyso internetka raaxada gurigaaga.
HADDABA MA LACAG KU SAMEYN KARTAA ONLINE?
Jawaabta su'aashan, lacag ma ku samayn kartaa internetka waa haa iyo maya. Waxaa jira siyaabo badan oo fudud oo si dhakhso leh looga sameeyo $ 100 khadka tooska ah. Waxaan diyaariyey liis ah 30 siyaabood oo fudud oo lacag looga sameeyo internetka. Intaa waxaa sii dheer, haddii aad rabto inay noqoto mid joogto ah, sidoo kale waa wax aad u fudud.
Runtu waxay tahay, Haddii aad rabto inaad lacag ka dhigato lacag -la'aan online -ka ah, markaa waxaad u baahan tahay inaad si adag u shaqeyso oo aad maal gashato waqtiga.
Liiskani ma aha kuwa raadinaya “xabbad sixir ah” si ay lacag u helaan. Xusuusnow, “Waxba nolosha kuma sahlana. Xitaa Santa wuxuu la imanayaa Qodob. ”
MAXAAD U BAAHAN TAHAY IN AAD BILAABO IN AAD LACAGTA KALIYA KA QAATO
Ku kasbashada dakhliga onleenka waxaa loo tixgeliyaa inay tahay ikhtiyaar aad u fiican dad badan.
Waxaa intaa dheer, sababta ayaa ah in kasbashada dakhliga onlaynku ay tahay hab aad u fiican oo lagu kabo dakhligaaga, markaa kuma tiirsanaan hal jeeg. Qaarkood xitaa waxay u rogaan xirfad.
Sababaha kale ee loo bilaabi karo samaynta lacag onlayn ah waxaa ka mid ah;
1. Ka shaqaynta meel kasta waa suurtogal
Waxaad samayn kartaa tan. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad hesho meel aad ku dareento raaxo. Dabagalka looma baahna hadda. Waa waqtigii la macsalaameyn lahaa qolalka guddiga.
Ikhtiyaaraadka ayaa ah kuwo aan dhammaad lahayn marka aad wax walba ka heli karto khadka tooska ah-haddii aad ka shaqeyneyso qolkaaga rakaabka, meelaha cusub ee wada-shaqaynta cusub ee badhtamaha magaalada, ama aad ku qoslayso maqaaxi ku taal magaalada aad jeceshahay.
2. Waa kuma madaxa?
Faa'iido weyn oo aad u leedahay inaad naftaada u shaqayso ayaa ah inaad ogaato in go'aan kasta oo aad gaadho uu gabi ahaanba adiga yahay, guul kasta oo aad gaadhona ay tahay mid adiga iska leh. Taasi waxay dareemeysaa xorriyad ka badan wax kasta.
3. Xeerka Labiska
Dadku ma oga in aad surwaal xiran tahay iyo in kale haddii aad ka shaqeyso guriga. Kaliya iska hubso inaad si habboon u labbisan tahay haddii aad wicitaanno fiidiyow ah la leedahay alaab -qeybiyeyaasha ama la -hawlgalayaasha.
4. Awooddaada Helitaanka waa mid aan xad lahayn:
Dejinta hadafyadaada iyo qiimeynta waxqabadkaaga ayaa ah arrin lama huraan u ah iskii u shaqaysiga. Adiga ayaa ka mas'uul ah dakhligaaga, sidaa darteed mar dambe ma heshid mushahar, laakiin kuma xirna ama kuma go'aamiso dhismayaasha shirkadaha.
Intaa waxaa dheer, fursadahaaga kasbashada waa kuwo aan dhammaad lahayn.
30 WABAB OO UGU FIICAN IN LAGU SAMEEYO LOON ONLINE BILAABAYAASHA
Siyaabaha ugu wanaagsan ee lacag looga sameeyo internetka bilowga ah waxaa ka mid ah;
1. SOO BAAR SIINTA
Haddii aad haysato waqti oo aad rabto inaad ku raaxaysato intaad ku jirto, sahan qaado. Ka faa'iidayso shaqooyinka aaladaha sida Timebucks, AppKarma, Swagbucks, iyo inbadan. Mid kasta oo ka mid ah aaladahaan ayaa ku siin doona bilow bilow ah si aad lacag uga sameysato internetka.
Swagbucks waa goob lacag la'aan ah oo laga helo internetka. Marka hore, iska qor bogga internetka. Ka dooro hawsha aad rabto sida dukaanka onlaynka ah, fiidyowyo fiirso, sahanno, iwm. Dhammee hawsha sahanka oo Swagbucks ayaa ku siin doonta kaararka hadiyadda ama lacag caddaan ah. Taasi waa ikhtiyaar aad adigu samayn karto.
2. IIBIYO SAWIRADA
Iibinta sawirrada waa hab wanaagsan oo lacag lagu helo internetka. Shirkado badan ayaa u baahan sawirro qurux badan oo loogu talagalay naqshadeynta funaanadaha, gidaarka, kiisaska taleefanka, iwm.
Si aad lacag uga hesho sawirrada iibinta onlaynka, hubi aaladaha sida Shutterstock iyo istockphoto.
Istock.com waxay kuu oggolaaneysaa inaad iibiso sawirro, laakiin marka hore, waa inaad kala soo degtaa app -ka sawirrada Getty App Store ama Google Play. Kadib, ku dheji 3 illaa 6 sawirro, fiidyowyo, ama muunado sawirro ah iyada oo loo marayo xiriirinta YouTube -ka.
Ka dib marka taas la sameeyo, sug si aad dib -u -eegis ugu samayso shaybaarkaaga si aad u ogaato haddii laguu oggolaado mid ka mid ah labada sawir - Getty ama istock.
3. DHIBAATOOYINKA AUDIOS
Ku -qoridda meheradaha yaryar ama kuwa waaweyn waxay lacag kuugu samayn karaan internetka. Waxaad asal ahaan u beddeli doontaa maqal qoraallo waaweyn oo lacag samayn doontaa.
Qorista shaqooyinka si aad ah ayaa loo kala soocay waana shaqo dabacsan in la sameeyo. TranscribeMe.com waa goob lagu talin karo inaad ku bilowdo. Iska qor TranscribeMe.com oo tababar lacag la'aan ah iyo koorso imtixaan ayaa laguu soo diri doonaa.
Marka koorsada la dhammeeyo, shaqo lacag leh ayaa kuu diyaar ah. Noqoshada xirfadle TranscribeMe, waxaad kasbataa qiyaastii $ 15 illaa $ 22 saacad kasta oo maqal ah.
4. MACALIN MUUQAAL
U wareeji aqoontaada kuwa kale oo ka baxsan afarta darbi ee waxbarashada.
Qaado shaqooyin si aad maaddooyinka ugu barato internetka adiga oo aan qolka la joogin ardayda Aaladaha sida Preply.com iyo VerbalPlanet.com ayaa u jira adeeggaaga. Mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaad macallin bilaash ah ku noqotaa.
Is-qoritaanka Preply.com waa lacag la'aan waxaadna diyaar u tahay inaad barato in ka badan 800,000 oo arday waqti kasta iyo meel kasta. Noqo marti -geliye Preply.com ka dib markaad is -qorto ka dibna qaado fasalkaaga koowaad.
Waxay kuu saamaxaysaa inaad ku dallacdo qiimaha aad adigu dooratay. Horumar kooxdu waxay tababar kugu siisaa webinars -ka si kor loogu qaado xirfadahaaga.
5. NOQO QAADE
Warbaahinta bulshada ayaa ah dahabkaaga haddii aad taqaan sida loo isticmaalo. Shirkadaha ayaa aad ugu baahan dhagaystayaal badan iyo joogitaanka warbaahinta bulshada.
Shaqadaadu waa inaad ka dhisto dhagaystayaasha warbaahinta bulshada oo aad ka caawiso ganacsiyada iyo shirkadaha inay kor u qaadaan badeecadooda. Waxaad kasbataa guddi iibsi kasta oo badeecadooda ah.
Si fudud ula xiriir shirkadaha sumaddooda iyo alaabadoodu muhiim u yihiin dadka. U diyaari qorshahaaga lacag bixinta shirkadda oo hubi inaad ku qanacsan tahay.
Waxaad sidoo kale ku abuuri kartaa gig on Freelancer.com oo lagu shaqaaleysiiyo shaqo.
6. SOO QAAD SHAQA SHARCIGA
Ma ku fiican tahay hubinta khaladaadka naxwaha iyo saxnaanta? Ka dibna qaado adeegga dib -u -akhrinta. Buugaag iyo sheekooyin kale oo qoran ayaa ah waxaad samayn lahayd.
Waa hawl herculean ah laakiin lacagtu waa u qalantaa. Qorayaasha ayaa lacag badan ku bixiya adeeggan. Aaladaha sida Fiverr.com iyo Upwork.com waa meesha laga kireysto.
Ku biloow Fiverr oo samee astaan ​​xirfadeed si aad u soo jiidato macaamiisha saxda ah. Ka dibna samee giraanta dib -u -akhrinta.
7. DIB U QOR
Lacag ku samee internetka fikradahaaga adiga oo aan wax kharash ah kuugu fadhiyin. U oggolow dadka iyo summadahu inay ogaadaan waxaad ka aaminsan tahay alaab leh dib -u -eegis lagu sameeyay badeecadda.
Dib -u -eegistaadu waxay ka caawisaa summadaha inay ogaadaan sida badeecadoodu u noqon karto dadweynaha. Ku biir aaladaha tan waa Crowdtap.com, softwareJudge.com, ModernMom.com, iwm.
Ku billow inaad lacag la'aan iska diiwaangeliso aaladahaan. Kadib codso calaamad oo qor dib u eegis. Had iyo jeer si daacadnimo ah dib ugu eeg alaab kasta oo aad cod u leedahay.
8. FANKA IIB
Quruxda ka dambeysa farshaxankaaga ayaa lala wadaagi karaa dadka kale si ay u arkaan oo hindise -bixiyaha ugu sarreeya uu guriga kula tago.
Waxaad u baahan tahay inaad noqoto fanaan lacag sameeya wuxuu sameeyo. Madal sida Society6.com ayaa ku siin kara waddo aad lacag ku kasbato internetka.
Ku samee dukaankaaga Society6 adiga oo marka hore abuuraya koonto Paypal (ujeeddooyin lacag -bixin ah), sawirka daboolka 1000/100px, 50 eray oo bio ah, ka dibna gelinta fankaaga.
9. FIIRO VIDEOS
Miyaad leedahay xirfad tafatir oo aad rabto inaad ugu badiso lacag? Waxaa jira lacag badan oo lagu sameeyo tifaftiraha fiidiyaha iyo aaladaha saxda ah, waxaad bilaabi kartaa inaad lacag sameyso.
Ku samee akoonno aaladaha sida Mandy iyo ProductionHub. Waxaad ka bilaabi doontaa ProductionHub.com ka dib markaad ku muujiso shaqadaada astaan ​​la abuuray. Ka jawaab hogaaminta iyo dalabka mashaariicda. Sidoo kale, si toos ah ula xiriir macaamiisha si aad u hesho shaqo waqti-buuxa ah ama waqti-dhiman ah.
10. Iibiya Koorsada ONLINE
Maalmahan waxaa jira koorsooyin kala duwan oo loogu talagalay baahiyo kala duwan. Sidoo kale, u beddel fikrad koorso qiimo u leh dadka kale.
Waxaad ku iibin kartaa fikradahaas koorsooyin ku saabsan aaladaha sida Udemy, Coursera, SkillShare, iwm. Iska qor SkillShare.com oo marti u noqo. Iibso koorsooyinkaaga ardayda.
11. GUDBINTA QAADO
Maalmahan badeecooyin badan ayaa lagu iibiyaa khadka tooska ah taas oo ka dhigaysa shirkadaha iyo ganacsiyadu inay raadsadaan dad si ay u fuliyaan adeegga gaarsiinta alaabada lagu soo iibsaday goobahooda internetka.
Adeegga geynta waa shaqo dabacsan oo aad samayn karto oo lacag ku samayn karto. Waxaad ku bilaabi kartaa adiga oo hubiya shirkadaha ama meheradaha ku iibiya internetka. Ka fikir inaad la xiriirto meheradaha kuu dhow
12. NOQO QORAAL GRAPHIC
Ku dabaq xirfaddaada garaafyada oo lacag ku samee internetka. Fursadaha naqshadeeyayaasha garaafyada si ay lacag u helaan waa kuwo aan dhammaad lahayn.
U samee naqshado qurux badan oo soojiidasho leh ganacsiyada sida astaamaha, naqshadaha funaanadaha iyo xitaa kiisaska taleefanka, iwm.
Goobaha sida Visme ayaa lagu shaqaalaysiiyaa. Si aad ugu biirto qoyska Visme, is -qoritaanku waa bilaash. Dooro noocyada nuxurka aad rabto in lagu shaqaaleeyo oo ka shaqee dhadhanka macmiilkaaga.
13. FURAHA KIRADA
U kiraynta booskaaga dadka ujeeddooyin shaqo ayaa lacag kaa dhigi kara.
La wadaagida booskaaga martida madal sida Airbnb waa hab wanaagsan oo lacag lagu kasbado.
Tani waxay la imaanaysaa xoogaa shaqo ah haddii aad rabto dib -u -eegis martida oo wanaagsan sida nadiifinta booskaaga si aad ugu haboonaato rabitaanka martida.
Ku-martigelinta gurigaaga Airbnb waxay kaa dhigaysaa qiyaastii $ 406 bishii oo leh is-qoritaan bilaash ah. Wax badan ka baro Airbnb.com
14. BIXINTA DARYEELKA XANUUNKA
Ma waxaad tahay qof jecel xayawaanka? Miyaad la joogi kartaa maalinta oo dhan xayawaan rabaayad ah oo ku raaxaysan kartaa daqiiqad kasta? Markaa xoogaa xoogaa lacag ah ku samee ballanso adeegga Rover.com iyo Care.com.
Caawi si aad u raacdo eyga oo aad lacag ku hesho intaas uun. Waxaad ka qaadataa lacag ku saleysan saacadaha socodka eyga.
Akhri: Mushahar Ma Lagu Siiyaa Eeyaha Koriya? 10ka Siyaabood ee Ugu Wanaagsan ee Lacag Looga Sameeyo Eeyaha Sanadka 2021
15. APP TIJAABINTA CAAWIMAAD
Tijaabinta barnaamijyada loogu talagalay sumadaha ayaa noqon kara xulasho wanaagsan oo lacag lagu kasbado gaar ahaan haddii aad dhadhan fiican u leedahay waxyaabaha cusub.
Waxaad ku bilaabi kartaa madal sida UserTesting.com. Codso adiga oo iska diiwaangelinaya lacag la'aan iyo imtixaan degdeg ah si aad ugu biirto bulshada UserTesting.
Xulo imtixaanka adiga kula habboon oo la wadaag aragtidaada daacad ah summadaha si aad ugu horumariso badeecadahooda ama adeegyadooda.
16. Iibiya GADGET -kii hore
Ha ku kaydin qalabkaagii hore dukaanka. Lacag ka samee halkii aad ka dhigi lahayd inay dukaanka jiifaan iyagoo aan waxba samayn.
Bilaw hadda si aad u geyso dhammaan aaladahaas duugga ah meesha aad ka iibin karto oo naftaada lacag u samaysan karto.
Waxaad iska diiwaangelin kartaa madal sida Swappa.com si aad u bilowdo iibinta aaladahaas duugga ah. Codso oo dooro liiska iibinta. Ka dooro qaybta aad rabto inaad iibiso.
17. HORUMARKA MAALINTA
Noqoshada horumariyaha mareegaha waxay kuu keeni kartaa lacag aad u badan. Xirfadaha horumarinta shabakadda ayaa aad loogu baahan yahay ganacsiyada doonaya inay gaaraan dhagaystayaal badan.
Meelaha internetka ee lagaa heli karo waa Fiverr.com, Flexjobs.com, SolidGigs.com. Is-qoristu waa lacag la'aan
Mid kasta oo ka mid ah aaladahaas ayaa lacag kaa dhigi kara adiga oo marka hore abuuraya astaan ​​cajiib ah ka dibna gig-horumarinta webka ee adeegga aad bixiso.
18. MAGACYADA AMA TARTANKA SLOGAN
Ma haysaa magacyo ganacsi oo badan ama halku dhigyo aad ku wacdo shirkad? Ku biir madal-ku-saleysan tartanka si aad taas u samayso.
SquadHelp.com waa madal furan si loo bilaabo u gudbinta magacyadaas, summadaha ama halku -dhigyada, iyo astaamaha shirkadaha u baahan. Isku qor SquadHelp lacag la'aan.
Waxaa laguu qoondeyn doonaa tartamada qiimeyntaada iyo marka aad koontadaada dhameysato waxaa loo dallacsiin doonaa 'Helitaan Buuxda'. Hadda waad tartami kartaa oo lacag baa lagu siin karaa.
19. IIDI CODKAGA
Noqo fanaan cod-dhaaf ah oo leh khibrad yar ama aan lahayn haba yaraatee oo weli lacag samee. Waxa kaliya oo ay tahay inaad soo bandhigto si aad xoogaa lacag ah u hesho waa codkaaga.
Waxaad cod u samayn kartaa fiidiyaha, ciyaarta, demo-soo-saarka, iyo in ka badan. Codsashada shaqo cod-dhaaf ah oo ku saabsan aaladaha sida Voices.com, Mandy.com, Flexjobs, Freelancer.com, iwm.
Ku biir Mandy.com lacag la’aan oo dooro gigga aad rabto inaad bixiso. Taasi way fududahay.
Read: Sida Loo Noqdo Jilaa Codka: Iskuulada, Mushaharka, Qiimaha.
20. WADA BAABUURTA
Lacag ka samee internetka adiga oo isticmaalaya baabuurkaaga raacitaan. Ku gaadhsii dadka kale meelaha ay tagaan baabuurkaaga intaad lacag u samaynayso adeegga.
Ku soo biir aaladaha internetka sida Uber.com iyo Lyft.com si aad u ballansato gaarigaaga adeeggaas. Isku qor mid kasta oo ka mid ah aaladahaan si bilaash ah sidoo kale dooro goorta aad lacag samaynayso.
Bixi dukumiintiyada sida liisanka darawalnimada, dukumiintiyada gaariga oo dhan, iwm, si aad u dhammaystirto diiwaangelintaada.
21. LAHAA BLOG
Inaad haysato baloog kuu gaar ah ayaa noqon kara xulashada ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo samaynta lacag. Waa hab wanaagsan haddii aad jeceshahay qoraalka.
Waxaad had iyo jeer qori kartaa nuxur si aad u ahaato mid ku habboon oo sidoo kale la wadaagi kara ilaha waxtarka leh dhagaystayaashaada iyada oo loo marayo xayeysiis oo aad kasbato guddi iibsi kasta oo ku jira balooggaaga.
In kasta oo marka hore lacag laga yaabo in aysan ahayn wax fudud laakiin marka la joogteeyo, waxaad lacag ka samayn kartaa.
22. KAALIYE FARAX
Lacag ku samee internetka adiga oo kaaliye u noqda ururada adigoon joogitaankaaga jirka ahayn.
Hawlaha sida cilmi -baarista, xisaabin, maareynta iimaylada, safarka ballanka iyo wixii intaa ka sii badan ayaa ah waxa aad ka caawin karto ururrada sidii kaaliye dalwaddeed dhammaan raaxada aad doorato.
Bilow adiga oo ku siiya adeeggaaga kaaliye dalwad leh aaladaha sida Upwork.com, Indeed.com, Remote.co.
U samee heesaha adeegyadan oo aad la qabsato macaamiisha.
Sidoo kale akhri: 10 Bixinta Shaqooyinka Kaaliyaha Virtual ee Bilowga sanadka 2021.
23. GADAA HEESTAADA
Ma haysaa hees weyn oo ma rabtaa in dadka kale dareemaan xiisaha heesta? Waxaad ku iibin kartaa heesahaas khadka tooska ah waxaadna lacag ka samayn kartaa hibadaada.
Aaladaha sida SoundBetter.com ayaa si dhaqso leh kugu soo dejisa.
Dooro nooca koontada aad rabto - bilaash ama lacag -bixin. Ku bilaw koonto bilaash ah ayaa kaa dhigaysa mid darajada hoose leh oo aan marin u lahayn guddiga. Premium wuxuu ku siinayaa marin buuxda guddiga. Sidoo kale, astaantaada ayaa meel sare maraysa. Bilowga ugu fiican - hel koontada bilaashka ah oo kor ugu qaad qiimahaaga goor dambe.
24. SHAQO GELINTA MACLUUMAADKA
Miyaad rabtaa inaad adeegsato kartida makiinadaada wax -qorista si aad u isticmaasho oo aad lacag uga hesho? Mid ka mid ah habka ugu fudud ee loo samayn karo waa iyada oo la codsado shaqo gelitaan xog.
La xiriir shaqooyinka macaamiisha doonaya inay ku shaqaaleeyaan aaladaha sida Flexjob.com, SolidGigs.com, iyo inbadan.
Ku billow abuurista astaan ​​soo jiidata dareenka macaamiisha. Samee qoob -ka -ciyaar loogu talagalay adeeggaaga iyo waxa aad ka qaaddo shaqada.
25. GURI GAARI
Qaado baabuurkaaga firaaqada ah oo lacag ka samee inta uu kirada ku jiro. Sii gaarigaaga marti si uu u isticmaalo oo lacag u helo.
Aaladaha sida Turo.com iyo GetAround.com waa meelo lagu kireysto gaarigaaga. Codso sidii marti -geliyeyaal meelahan bilaash ah. Ka diiwaangeli gaarigaaga Turo.com ama GetAround.com oo liis garee.
Had iyo jeer hubso in gaadhigaagu diyaar u yahay ballansasho.
26. Iibso ONLINE
Ma rabtaa inaad lacag samaysato mar kasta oo aad wax iibsanayso? Kharajkaaga wax iibsiga ha kuugu sameeyo lacag aaladaha sida Swagbucks.com, MyPoints.com, BeFrugal.com, iyo inbadan.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad ka dukaameysato mid kasta oo ka mid ah dariiqyada meheradaha iyada oo loo marayo dukaan kasta oo tafaariiqda ah.
Waxaad kasbataa dhibco kadib dukaan kasta. U beddel dhibcahaaga midkood lacag caddaan ah ama kaadhadh hadiyadeed.
27. KU QOR DHEXDHEXAAD
Qoritaanka Dhexdhexaadku waa hal bilow oo qorayaashu ku biiraan malaayiin qoraayaal kale si ay ula wadaagaan aragtidooda iyo fekerkooda kala duwan.
Qoraa ahaan Medium.com, waxaad lacag ku kasbataa ku biirista Barnaamijka Wada -hawlgalaha halkaas oo kaliya xubnaha Dhexdhexaadku ay heli karaan sheekooyinkaaga.
Bilaabashadu waa bilaash. Ku daabac sheekooyinkaaga farsamada leh “Meter sanduuqa sheekadayda oo la hubiyay”. Ku kasbado lacag bil kasta sheeko kasta oo la akhriyo.
28. ISKA LEH CHANNEL -KA YOUTUBE
YouTube waa hal madal oo lacag kuu samayn kara. Madasha wadaagga fiidiyaha ee onlaynka ahi waxay kuu oggolaanaysaa inaad koontadaada lacag ka samaysato xitaa iyada oo aan jirin malaayiin macaamiil ah.
Waxaad ku samayn kartaa taas marka ugu horreysa ee aad gasho koontada YouTube, tag istuudiyaha YouTube, dooro lacag -abuurka, oo aad abuurto koonto Adsense si aad lacag u hesho. Isku qor barnaamijka YouTube Partner Program ama YouTube Premium.
YouTube Premium wuxuu ku shaqeeyaa xayeysiis la'aan iyo dadka aan xubnaha ahayn way arki karaan waxa ku jira walina waa lacag.
29. ADEEGGA TASHIGA
Sii talo xirfadeed iyo khabiir shaqsiyaadka ama ururada u baahan lacagna ka samee adeegaaga.
Maanta, waxaad ku siin kartaa talo khabiir khadka tooska ah dadka aan aqoonta u lahayn beertaada.
Tallaabooyinka la raacayo - si cad u sheeg takhasuskaaga, yeela degel, shahaado, dejiso sicirkaaga, iyo waliba nidaam sumcad leh.
La shaqee macaamiisha onlaynka leh aaladaha sida Freelancer.com iyo Remote.co.
30. NOQO COPYWRITER
Ganacsiga nuqul -qoraagu waa awoodda uu ku gaadhi karo malaayiin qof oo wata waraaqo.
Qorayaasha qorayaashu waa shirkadaha kanaallada u adeegsada inay kor u qaadaan dakhligooda. Baro xirfadda nuqulka adiga oo ka faa'iideysanaya koorsooyinka iyo akhrinta ilaha sida faylasha Swipe.
Ka caawi kordhinta iibka shirkadaha warqad xaraash ah oo si fiican loo farsameeyay sidoo kale naftaada lacag samee. Fiverr.com, Upwork.com, SolidGigs.com waa aalado lagu bilaabo.
Marka hore, dhis astaan ​​si aad u soo jiidato macaamiisha una dejiso qiimahaaga gig.
Maqaalkan, waxaan shaaca ka qaadnay siyaabaha ugu wanaagsan ee lacag looga sameeyo internetka. Waxaa la joogaa waqtigii aad xirfadahaaga ama fikraddaada ganacsi u qaadan lahayd heer kale. Waxaa jira macaamiil badan oo sugaya inay ku shaqaaleeyaan xirfadda aad heshay.
Bilowga waa inay ogaadaan in internetku yahay suuqa cusub si loo gaaro dhagaystayaal badan. Fursadaha badan ee internetka ayaa lacag kaa dhigi kara sida lagu tilmaamay.
In kasta oo maqaalkani daboolayo 30ka dariiqo ee ugu wanaagsan ee lacag lagu kasbado, waxaa lagugula talinayaa inaad doorato qaab kasta oo adiga kugu habboon.
Sida Loo Helo Lacag Adigoo Guriga Jooga Hooyo 2021: 13 Siyaabaha Sharciga ah
13 Barnaamijyada TV -ga Smart Smart ee ugu Fiican 2021 | Faallooyinka ugu Fiican
Waa maxay Vevo? | Dib u Eegid Buuxda: Sida ay dhigi Money
10 Xiddig -yaqaanka Ugu Fiican Chennai 2022 | Khibrada Ugu Fiican
Qoritaanka lacagtu waxay qaadan kartaa shaqo iyo dadaal badan, laakiin waa sidaas, aad ayay u qalantaa. Haddii…
Faallooyinka MySoapBox 2022: Sharci ama Fadeexad, Sida ay u Shaqeyso, Abaalmarinta & Abaalmarinta
Haddii aad ku faraxsan tahay dhammaystirka sahannada, MySoapBox waxay noqon kartaa hab la yaab leh oo lagu helo doollar dheeraad ah…
Samee Lacag Khadka Tooska ah ee Alaabada Google sanadka 2022
Waa tagay maalmihii google ay ahayd meel kaliya ee lagu socodsiiyo amarradaada raadinta. Hadda, lacag samaynaysa...
Sida loogu iibiyo Google Fikradaha App oo si aad ah loo bixiyo 2022
Google waxa ay si buuxda gacanta ugu haysaa waxa aanu ku aragno talefankeena,waxana ay uga faaidaystaan ​​in ay helaan xitaa...
10 Siyaabood oo Lacag looga Helo Xayeysiisyada Dhajinta Guriga 2021